शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०५ : ०८
प्रनेशको हिरासत अनुभव: ‘ म पुलिसको गाडीमा छु, हातमा हत्कडी छ ?’
म पुलिसको गाडीमा छु, हातमा हत्कडी छ र बयान दिन अदालत गइरहेको छु । मेरो बाबा कतै कुनामा उभिएर रुमालले आँखाको आँसु पुछिरहनुभएको छ । त्यो दृश्य मैले कसरी भुल्न सक्छु र !
‘केटाहरुको आवाजमा उटपट्याङ कुरा पाइन्छ’
एकदिन चलाएन भने के भयो कस्तो भयो, के बिस्र्यो के छुट्यो जस्तो भयो भने त्यो लत हो । यो रमाइलो हो । धेरै सिरियस भएर लाग्नु हुन्न । यो नचलाए पनि हुन्छ ।
‘म खराब मान्छेसँग भेट्दै भेट्दिन’
गायनमा इच्छा भए पनि मेरो पेशा नै यही हुन्छ होला भन्ने मलाई कहिल्यै लागेको थिएन। बस्, एउटा गीत रेकर्ड होस् भन्ने चाहना भने थियो। परिवार पनि मेरो मध्यमवर्गीय हो। खर्च धेरै गर्न सक्ने अवस्था थिएन।
अनुप बराल भन्छन् : ‘यौन दुव्र्यवहारको खुलासापछि १२ दिनसम्म पूरै उकुसमुकुस भयो ’
नेपाली चलचित्रको ट्रेन्ड कुहिरो भित्रको कागजस्तै देखिन्छ । कुनै एउटा जनराको फ्लिम हिट हुनासाथ यहाँ अरु फिल्ममेकर्सहरु त्यस्तै जनरा र स्टोरीको पछाडि अन्धाधुन्ध दौडन्छन् । मानौँ, हामीसँग भन्नको लागि कुनै कथा नै छैन ।
‘गुण्डा चैं नभनौँ न ल !’
माहोल अचानक अर्कै भयो । शिशिर पूरै रिसाएझैँ देखिए । अन्तर्वार्ता नै खल्बलिने सम्भावना बढ्यो । उनले चश्मा खोले र डरलाग्दो पारामा संवाददातालाई हेरे र आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भए र भने–तपाईंले मेरो खिल्ली उडाउनु भएको हो ?
लामो समयदेखि जसरी नेपाली समीक्षकले नेपाली फिल्मप्रति आलोचना गरिरहेका छन्, त्यसको कारणले नै हो यहाँ अहिले ‘हरि’ र ‘बुलबुल’जस्तो चलचित्र बनिरहेका छन् । ‘६क्कापञ्जा–३’ अघिल्ला सिरिजभन्दा सुधारिएर आउनुको कारण पनि यही नै हो ।
चलचित्र बोर्ड अध्यक्ष भन्छन्, ‘मैले हलवाला साथीहरुलाई बोलाएरै ‘सुध्रिनुस् है’ भनिसकेको छु’
तीन दशकदेखि अभिनय र निर्माणमार्फत् नेपाली फिल्म सक्रिय थिए, केशव भट्टराई । एक महिना भयो, अहिले उनी चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । नेपाली फिल्म अनिवार्य शुक्रवार नै रिलिज गर्नुपर्ने तर हिन्दी र अंग्रेजी जुनसुकै दिन पनि गर्न पाइने प्रवृत्तिविरुद्ध उनी कडा रुपमा उभिएका छन् । हालै उनले ‘कलंक’ फिल्मलाई बुधबार रिलिज हुनबाट रोकेर फिल्मकर्मीबाट वाहवाही कमाए
'जजसले बोल्नुभयो, उहाँहरुले केही नभइकन त पक्कै बोल्नुभएन । अहिले दुव्र्यवहारको घटना जसरी बाहिर आयो, अब यो त्यसै सेलाउनु हुँदैन । बहस हुनुपर्छ ।'
-यापर मिस्टर डी. भन्छन्, ‘भावना पोख्न छाडा बोल्नुपर्दैन’
जिन्दगी -याप हानेर नचल्ला तर जिन्दगी चल्नका लागि मलाई -याप हान्नुपर्छ के ! किनभने म -यापको ‘एडिक्ट’ भइसकेँ । बरु भोकै बस्न सकिन्छ तर -याप हान्नैपर्छ ।
‘अर्को फिल्मबाट प्रभावित हुनु खराब हैन’
अहिलेको अवस्थामा झण्डै ९० प्रतिशत जति नेपाली फिल्म कतै न कतैबाट प्रभावित नै भेटिन्छन् सायद... । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरियो भने त यहाँ फिल्म निर्माण हुनै बन्द हुन बेर छैन ।
‘दर्शक हँसाउन सेक्स कन्टेन्ट सजिलो हुन्छ’
'जहाँ भेट्दा पनि ‘एउटा जाओस् न’ भन्ने नै हो । साथीहरुको ग्रुपमा बसेको हुन्छ, ‘एउटा कमेडी जाओस् न’ भन्दिन्छन् । साथीको घरमा खाना खान गएको हुन्छ, अंकल आन्टीकै छेउमा एउटाले यसले त कमेडी गर्छ भनेर परिचय गराइदिन्छन् । अनि त्यसपछि प्रस्ताव आइहाल्छ, ‘ल, एउटा जाओस् न !’
‘क्याप्टेन’की अभिनेत्री उपासना भन्छिन्, ‘केस लाइदिउँ भनेर धम्क्याउने शैली ठीक होइन’
वास्तविक जीवनमा आर्मीका कर्णेलकी छोरी उपासना सिंह ठकुरी फिल्मी पर्दामा ‘क्याप्टेन’की प्रेमिकाको रुपमा प्रवेश गरिन् । अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘क्याप्टेन’बाट नेपाली फिल्म उद्योगमा डेब्यु गरेकी उनको सपना आर्मी बन्ने नै छ । भिन्न सपना हुँदाहुँदै उनी कसरी आइपुगिन् फिल्म क्षेत्रमा ? फिल्म क्षेत्रले उनलाई कसरी स्वागत ग-यो त ?
अभिनेत्री लक्ष्मीको तिताे अनुभव '‘नाम चलेका निर्देशकले रिसोर्टको रुमको ताल्चा खोल्न लगाए’
चलेका एक निर्देशकले ‘मैले फिल्म खेलाइसकेपछि बदलामा केही पाउनुपर्छ’ भन्नेखालको कुरा गर्न थाल्नुभयो । अझ साइडमा बसेको मान्छेले पनि ‘उहाँको पालो सक्किन्छ अनि मेरो पालो’ भनिरहेको थियो ।
रणवीर कपुरले फोनमा सोधे ‘तँ जिउँदै छस् नि’
‘बर्फी’को अडिसनका बेला अनुराग बासुले पनि एकपल्ट सोध्नुभएको थियो, तँलाई तेरो शरीरदेखि केही दुःख छ ? मैले त्यतिबेला मेरो हाइट सानो भयो, यसमा भने दुःख लाग्छ भनेको थिएँ । त्यतिबेला उहाँले ‘दुःख नमान, तेरो फरक कुरा यही नै हो’ भन्दै सम्झाउनुभएको थियो ।
गत साताबाट हलमा प्रदर्शन भइरहेको फिल्म ‘बुलबुल’बाट नेपाली फिल्ममा प्रवेश गरेका छन्– अभिनेता मुकुन भुषाल । फिल्ममा उनले निर्वाह गरेको ‘चोपेन्द्र’को क्यारेक्टरलाई दर्शकले मात्रै होइन समीक्षकले पनि खुलेर तारिफ गरिरहेका छन् ।
सरोज-आश्मा : ‘गर्लफ्रेन्ड–ब्वाइफ्रेन्डभन्दा पनि रिस उठ्दैन’
'उहाँहरुले हामीलाई गर्लफ्रेन्ड–ब्वाइफ्रेन्ड देख्न चाहनुहुन्छ नै । हामीले होइन पनि भनेका छैनौँ, हो पनि भनेका छैनौँ । हामीलाई पनि खुसी नै लाग्छ । हाम्रो पनि बेस्ट जोडी भएर चिनिने इच्छा छ । हाम्रो जोडीलाई देखेर अरूले पनि केही सिकून् भन्ने लाग्छ ।'
‘चान्स मार्नेलाई कडा प्रतिवाद गर्नुपर्छ’
मलाई त चान्स मार्न खोजे भने त्यहीँ ठीक पार्दिन्छु । एक त मलाई आँटै गर्दैन । गर्यो भने पनि म बलियोसँग प्रतिकार गर्छु, यसमा कुनै शंकै छैन ।
'म निर्देशकको आदेशमात्रै पालना गर्ने कलाकार होइन । हरेक दृश्य पछाडिको लजिक खोज्छु । त्यसैले हरेक फिल्म साइन गर्नुअघि म डाइरेक्टरसँग बस्छु र प्रस्टसँग भन्छु, ‘फिल्ममा काम गरेपछि तपाईंको मात्रै चित्त बुझेर हुँदैन, मेरो पनि बुझ्नुपर्छ ।'
धेरै राम्रो भइरा’को छ । नेपालमा यो २०१९ अब -यापको लागि हो । सबै र्यापरहरु अब जागिरहेका छन्, जोशिइरहेका छन् । सबै फ्रन्टमा आइरहेका छन् । मुभीदेखि सबै काममा -यापको प्रयोग भइरहेको छ । हेर्दै जानुस्, २०१९ मा -याप म्युजिकले तहल्का पिट्नेवाला छ ।